Madaxweyne Farmaajo: G/Banaadir waa in uu matalaad ku yeeshaa aqalka sare - Tilmaan Media
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo maanta khudbadii dastuuriga aheyd ka jeedinayay Kalfadhigii 7aad ee Baarlamaanka labada Aqal ayaa jeediyay codsi Madaxweyne oo ku saabsan Gobolka Banaadir.
Madaxweyne Farmaajo ayaa gabagabadii khudbadiisa furitaanka Kalfadhiga 7aad ku soo xiray in codsi uu u jeediyay Labada Aqal inay aqbalaan in Magaalada Mudisho ay matalaad ku yeelato Aqalka Sare.
“Maanta Waxaa Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka u jeedinayaa codsi Madaxweyne oo aan rajeynayo inaad iga aqbashaan aad igu taageertaan iguna sharaftaan, si aan u muujino tixgelinta iyo qaddarinta aan u heyno caasimadda Muqdisho, oo aan wada jecelnahay, si gaar ah meel gaar iga taal oo aan ku dhashay oo aan luuq luuq u aqaan oo aan ku koray fadlan igu raaca ay ku yeelato aqalka sare caasimadda muqdisho inay ku yeelato matalaada ay mudan tahay ayna muraayad uga wada noqoto dhamman shacabka Soomaaliyeed”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Inkastoo bilowgii hore Madaxweynaha uu khudbadiisa kala kulmay buuq iyo sawaxan ay kala hor-yimaadeen qaar ka mid ah Xildhibaannada mucaaradka, ayaa hadana waxaa uu muujinayay degenaan, isagoo ka dalbanayay Xildhibaannada inay ixtiraam muujiyaan oo ah in la is dhageysto.
Khudbadda Madaxweynaha ayaa ahaa mid si weyn loo sugayay, waxaa uu ku soo bandhigay waxqabadka dowladdiisa iyo guulihii ay gaartay, isagoo ku soo hadal qaaday xasilooni siyaasadeed oo dowladdiisa gaartay, fursada la siiyay Ra’iisul Wasaarihiisa.
Madaxweynaha ayaa sheegay inay ka go’an tahay in doorashada ku dhacdo waqtigii loogu tala galay.
Ciidanka xoogga dalka oo Al-Shabab kala wareegay deegaanka Abaal ee gobolka Bakool